Mogadishu Journal » Guddoomiyaha gobolka Sh/dhexe oo sheegay in barakac uu ka bilaaban karo deegaano kamid ah Gobolka
Guddoomiyaha gobolka Sh/dhexe oo sheegay in barakac uu ka bilaaban karo deegaano kamid ah Gobolka
Mjournal :-Guddoomiyaha gobolka Sh/dhexe Axmed Meyre Makaraan ayaa walaac ka muujiyay qorshaha lagu doonayo in loogaga saaro deegaano kamid ah gobolka Sh/dhexe ciidamada nabad ilaalinta AMISOM.
Wareysi uu siiyay laanta afka soomaaliga ee VOAda ayuu Guddoomiye Meyre Makaraan waxa uu ku sheegay inaysan habooneyn in xilligan laga saaro deegaano kamid ah Sh/dhexe ciidamada AMISOM iyadoo aan weli la gaarin ujeedadii loo geeyay halkaas.
“Ciidanka waxa ay u yimaadeen inay nabad sugaan oo dhibaato jirta wax laga qabto,shacabka iyo weliba dalalkii lacagaha badna ku bixiyay uma wanaagsana in ciidamada ay iska baxaan.”ayuu yiri guddoomiye Axmed Meyre.
Guddoomiyaha gobolka Sh/dhexe Axmed Meyre Makaraan ayaa sheegay in haddii ay ciidamada laga saaro degmooyin ka tirsan Sh/dhexe ay sababi karto in dadku ay ka barakacaan deegaanadooda.
Degmooyinka laga yaabo inay ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa dalka Burundi ka baxaan dhamaadka bishan ayaa waxaa kamid ah degmada Cadale iyo degmada RaageCeelle.
Toddobaadkii la soo dhaafay uu guddoomiyaha Gobolka Sh/dhexe Axmed Meyre Makaraan uu dhagax dhigey mashaariic laga hirgelinayo degmada Cadale.
Ururka Midowga Afrika ayaa dhowaan sheegay in laga saari doono gobolka Sh/dhexe illaa kun askari kuwaasoo noqonaya ciidamada la qorsheeyay in guud ahaan dalka Soomaaliya laga saaro sanadkan 2019.
Madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare iyo xubno ka tirsan Maamulka Hirshabelle ayaa hore walaac uga muujiyay ka saarista cidiamada AMISOM laga saarayo deegaano ka mid ah Hirshabelle iyadoo aan Maamulada kale ee dalka ciidamada ku sugan uusan hal askari ka baxaynin.
Ciidamada AMISOM oo dhawaan ka baxaya ….
Madaxweyne Farmaajo oo la kulmay madaxda Itoobiya, Jabuuti, Suudaan, Equatorial Guinea iyo Koonfur Afrika